Shina fanamaintisan-tsolika ambony Nanofiber membra Mask mpanamboatra sy mpamatsy | E.Fine
anaty rano Attractant
antibiotika Anarana iombonana
Mask Membrane Namofiber
Fambolena rano ho an'ny ahitra fotsy 96% Vidin'ny orinasa Potas ...
Mpanondrana 60% an'ny Tributyrin
Methyl 2-cyclopentanonecarboxylate 98% ho an'ny loxoprofe ...
Vidiny 98% Powder amin'ny kalsioma acetate
Betaine Hcl 95% Hydrochloride miaraka amin'ny kitapo 800kg
Trimethylamine-N-Oxide be dia be Dihydrate 98% TMAO Cas N ...
Vidin'ny acetate calcium calcium acetate ny mpamokatra
Ny sakafom-sakafom-boankazo dia mampihena ny 97%
Broiler Chinken Fahano Kilasy Betaine Anhydrous 96% Fac ...
Glycositamine karazana asidra amine pluripotent. Io dia ...
Akondroiazy 97% ny potasioma mitahiry akondro
Tributyrin Sakafo Sakafo 90%, Triglyceride Miaraka Amin'ny Butyric ...
Antibiotic Alternative Feed Grade Tributyrin 95% Ho ...
Mandaitra fametahana Nanofiber fanamafisana
Famoronana Nanofiber Famoronana High -efficiency Mask
1.Ny hery fanalefahana mahery vaika, dia tsy hitranga ny fisian'ny aretin-taovam-pisefoana
2. Sivana tsara. Ny fitotoana doka ara-batana sy elektrostika, fitambaran-doko miaraka amin'ny membra nanofiber sy lamba vita amin'ny vovoka dia ho tanteraka ny tombony azo avy amin'ny sivana hierarchical miaraka amin'ny sivana roa.
3.Nanofiber fitaovana dia niditra an-tsehatra amin'ny PM2.5, ny vovobony, ny otrikaretina ary ny bakteria mahomby, misy ihany koa ny fiadiana amin'ny otrikaretina tsara sy ny fanamorana.
4. Ny ampahany mainty sy fotsy amin'ny sary dia sarin'ny mikroskopika elektronika amin'ny nanofiber
5. Ny sela lamina nanofiber dia 100-300 nanometer, aperture ny lamba mitelina miempo dia 1-5 micrometer izay fitaovana manivana ankehitriny dia vovoka mihelina. Ny fiaroana miaro amin'ny lamina nanofiber dia tsara kokoa, noho ny tsimokaretina gripa sy ny coronaviruse novelarina izay lehibe eo anelanelan'ny 100-200 nanometer.
Shandong Bluefuture Nanofiber membra Mask
Ny lamina nanofiber effet nanofiber elektrika dia fitaovana vaovao miaraka amin'ny fanantenana fampandrosoana lehibe. Manana aperture kely izy io, eo ho eo amin'ny 100 ~ 300 nm, faritra be velarana manokana. Ny membra nanofiber vita dia manana toetra mampiavaka ny lanjany maivana, faritra midadasika, aperture kely, fahazoana rivotra tsara sns .., dia mahatonga ny fitaovana hanana drafitra stratejika amin'ny filtration, ny fitaovana ara-pahasalamana, tsy manamora ny rano ary ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny sehatry ny angovo sns.
Ny sela lamina nanofiber dia 100-300 nanometer, aperture ny lamba mitelina miempo dia 1-5 micrometer izay fitaovana manivana ankehitriny dia vovoka mihelina. Ny fiaroana miaro amin'ny lamina nanofiber dia tsara kokoa, noho ny tsimokaretina gripa sy ny coronaviruse novelarina izay lehibe eo anelanelan'ny 100-200 nanometer.
Asio saron-tava ny nanofiber. Mba hahatratrarana ny filtrika bebe kokoa, indrindra ho an'ny sivana ny famafaonan'ny fiara, ny entona simika, ny sombin-tsolika. Voavaha ny fatiantoka ny fiampangana ny adsorption ny lamba miempo amin'ny vinaingitra miaraka amin'ny fiovan'ny fotoana sy ny tontolo iainana ary ny fanamafisana ny fiasan'ny filtration. Ampio mivantana ny fiasan'ny antibakteria, mba hamaha ny olana momba ny fihanaky ny bakteria vokatry ny fihenan'ny bakteria hita any amin'ny tsena. Ataovy mahomby sy maharitra ny fiarovana.
2.Fana sivana. Fandrindrana doka ara-batana sy electrostatic dobro, miaraka amin'ny membra nanofiber sy lamba vita amin'ny welt dia hahatanteraka ny tombony azo avy amin'ny sivana hierarchical miaraka amin'ny sivana roa.
3.Manatena ny fihenan'ny lozisialy amin'ny tsena eo an-tsena amin'ny singa misy menaka. Ary nahatsapa ny fikatonan'ny lozika ara-teknika ny sakana ara-teknika amin'ny menaka Oily sy tsy misy menaka.
4.Azoana ny tsy fatiantoka izay harge mora hanjavona sy mahantra sivana vokatry ny kivy-tsofina landihazo
5. Afaka mametaka ny fiasan'ny Anti-bakteria, anti-inflammatory ary deodorant
Previous: Ny tributyrin fitambaran-tsakafo hafa dia miaro ny Gastrointestinal Tract
Next: Mask Famoronana Nanofiber Famonoana ankizy
Nanofiber Anti-haze Mask mahafeno ny fenitra N95, iray ...
Nanofiber Mebrane - indostriansy manokana Prot ...
Anti-virus N95, N99 indray mandeha mampiasa ankizy miforitra ...
Masidahy mifono fiarovana manofiber fiarovana
Rafitra fanivanana ny rafitra rivotra madio
sarona sarisary filtration sarobidy ambany vidiny
Address: Zone orinasa (Atsinanana ny Fumin Road) Economic Development Zone, Linyi City, Shandong, Sina
Ondry Feed , Kisoa Feed Additives , Fahano Additive Betaine Hcl , 3-Hydroxyxy-N-Methyl-3-Phenyl-Pr , Fahano Additive, Active mpanamboatra fanafody Intermediates,